Sawirro+Video: Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Dagaallada Magaalada Jigjiga iyo Kaniisado Dab laqabadsiiyay.
Saturday August 04, 2018 - 18:13:51 in Wararka by
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo culus oo maanta ka dhacay magaalooyin katirsan dhulka Soomaaligalbeed ee gummeysiga xabashida Itoobiya ku jira.
Ugu yaraan 15 ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen iska hor'imaadyo ka dhacay waqooyiga iyo bariga magaalada Jigjigay, saaka aroortii hore ayay ciidamada melleteriga dowladda Itoobiya isku gedaameen xarumaha maamulka magaalada Jigjiga illaa markii dambe ay si buuxda ula wareegeen.
Weerar rogaal celis ah oo maleeshiyaadka Liyuu Booliska iyo saraakiil Tigree ah ku qaadeen ciidamada itoobiya ee saaka magaalada jigjiga qabsaday ayay ugu suurtagalay in ay dib ugula wareegaan magaalada.
Cabdi ileey oo hadal kooban ka jeediyay Telefeshinka 'DDSI' ayaa sheegay in ay wadaan dadaal ay ku xasilinayaan magaalada sida uu hadalka u dhigay, ilo wareedyo ayaa sheegaya in kumanaan katirsan maleeshiyada Liyuu Booliska ay galabta dib ugu laabteen xarumihii maamulka.
ugu yaraan 125 qof oo ku dhaawacmay dagaalladii maanta ayaa la dhigay isbitaallada Jigjiga, ciidamada melleteriga Itoobiya oo saaka qabsaday magaalada ayaa lagu qasbay in ay dib uga gurtaan xarumaha maamulka balse melleteriga Xabashida ayaa wali gacanta ku haya garoonka diyaaradaha Jigjiga iyo wadada aadda dhanka magaalada Harar iyo dhammaan waddooyinka Jigjiga soo gala.
Saraakiil katirsanaa dowladdii Males Zenawi kanasoo jeeda qowmiyadda Tigreega ayaa la xaqiijiyay in ay Cabdi ileey ku gacansiiyeen dagaalkii maanta waxaana saraakiishaas kamid ah General Gabre iyo General Abraha quarter.
Bililiqo baahsan ayaa loo geystay goobaha ganacsiga magaalada Jigjiga, maleeshiyaad deegaanka ah iyo dad careysan ayaa bililiqeystay hanti ay lahaayeen dadka kasoo jeeda qowmiyadda Oromada.
Ugu yaraan 2 Banki ayaa lajabsaday sidoo kale hanti ayaa laga boobay illaa 20 dukaan sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah oo warbaahinta lahadlay, dad caraysan ayaa dab qabadsiiyay Kaniisadda ugu weyn magaalada Jigjiga oo xilligaas ay ku sugnaayeen dad Nasaaro Xabashi Itoobiyaan ah.
Xildhibaanno iyo wasiirro katirsna maamulka dabadhilifka Somaligalbeed ayaa warbaahinta uxaqiijiyay in ay la'yihiin Cabdi ileey iyagoo R/wasaaraha Itoobiya ku eedeeyay in uu ugacma qabanayo qowmiyadda Oromada sida ay hadalka u dhigeen.
Magaalooyinka dhagaxbuur iyo Godeey ayaa lagasoo sheegayaa rabshado, ugu yaraan sedax qof shacab ah ayaa la xaqiijiyay in ciidamada gummeysiga Itoobiya ay ku dileen afaafka hore ee saldhigga booliska magaalada.
Dhaq dhaqaaqyada melleteri ee kajira magaalooyinka dhulka Soomaaligalbeed ayaa imaanaya xilli kacdoonno shacbi ay maalmihii lasoo dhaafay jireen kuwaas oo loogasoo horjeeday maamulka Cabdi ileey ee xasuuqa ku haya shacabka.